Zviga zvebvumirano - JPEG.to
Pazasi pane shanduko yakaoma yeedu rechirungu mazwi ebasa uye chirungu chekuvanzika mutemo wezvemitemo zvinhu zvese zvinoshanda chete muChirungu
JPEG.to Migomo Yebasa
Nekuwana webhusaiti iyi paWhatsApp : Kana iwe usingabvumirani nechero yeaya mazwi, unorambidzwa kushandisa kana kuwana saiti ino. Izvo zvinhu zvirimo mune ino webhusaiti zvinodzivirirwa neanoshanda copyright nemutemo wekutengesa.
Mvumo inopihwa yekukopa kwechinguva imwe kopi yezvishandiso (ruzivo kana software) pane webhusaiti yeJPEG.to yekuzviona, isiri-yekutengesa yekufambisa chete. Uku ndiko kupihwa rezinesi, kwete kuchinjisa zita remusoro, uye pasi peisensi ino haugone:
shandura kana kutevedzera zvigadzirwa;
shandisa zvigadzirwa zvechinangwa chero chipi zvacho,
kuyedza kuora kana kudzosera mainjiniya chero software iri pane yeJPEG.to webhusaiti;
bvisa chero copyright kana zvimwe zvakabvumirana notations kubva pane izvo zvinoshandiswa; kana
chinjana zvinhu zvacho kune mumwe munhu kana 'girazi' zvinoshandiswa pane chero imwe server.
Reisensi iyi ichagumisa otomatiki kana ukatyora chero chipi zvacho chinotadzisa izvi uye inogona kugumiswa neJPEG.to chero nguva. Kana wapedza kuona kwako zvinhu izvi kana pamusoro pekudzima kweisensi iyi, unofanirwa kuparadza chero zvinhu zvawakatora zvingave zvako mumagetsi kana zvakadhindwa.
Izvo zvinoshandiswa zviri paJPEG.to webhusaiti zvinopihwa pane 'sezvazviri' nheyo. JPEG.to haina waranti, inoratidzwa kana kuisirwa, uye nokudaro inoregedza uye inoregedza dzimwezve warranties kusanganisira, pasina muganho, anoreva warriti kana mamiriro ezvinhu ekutengesa, kurongeka kwechinangwa chakati, kana kusaputsa kodzero yeuchenjeri kana kumwe kukanganisa.
Kupfuurirazve, JPEG.to haitenderi kana kuita chiratidzo chekuratidzika, zvingangoitika, kana kuvimbika kwekushandiswa kwezvinhu zviri pawebhusaiti yake kana zvimwe zvine chekuita nezvinhu zvakadaro kana pane chero saiti yakabatana nesainzi.
Hapana chiitiko chinofanirwa kuve JPEG.to kana vatengesi vayo vachatakura chero kukuvara (kusanganisira, pasina muganho, kukuvadza kurasikirwa kwe data kana purofiti, kana nekuda kwevhiringidziko yebhizinesi) kumuka kubva mukushandiswa kana kusakwanisa kushandisa zvinhu zviri paJPEG.to webhusaiti, kunyangwe kana JPEG.to kana JPEG.to mumiriri ane mvumo akaudzwa nemuromo kana kunyora nezvekukuvara kwakadaro. Nekuti dzimwe nzvimbo dzisingatenderi miganho pane zvinorehwa warranties, kana kuganhurika kwekuremerwa kwezvakakonzeresa kana zviitiko zvinokuvadza, izvi zvinogumira hazvizoshanda kwauri.
5. Kurongeka kwezvinhu
Zvishandiso zvinowoneka pawebsite yeJPEG.to zvinogona kusanganisira zvetekinoroji, typographical, kana kukanganisa mifananidzo. JPEG.to haishandi kuti chero zvigadzirwa zviri pawebhusaiti yayo zvive zvakanaka, zvizere kana zvazvino. JPEG.to inogona kuita shanduko kune zvigadzirwa zviri pawebsite yayo chero nguva pasina ziviso. Nekudaro JPEG.to haina kuita chero kuzvipira kugadzirisa zvinyorwa.
JPEG.to haina kuongorora rese saiti rakabatana newebhusaiti uye haina chekuita nezvirimo mune chero akadai saiti yakabatana. Iko kusanganiswa kwe chero chinongedzo hazvireve kubvumidzwa neJPEG.to renzvimbo. Kushandisa chero webhusaiti yakadai yakabatana kuri panjodzi yemushandisi.
JPEG.to inogona kugadzirisa aya ebasa webhusaiti yayo chero nguva pasina ziviso. Nekushandisa iyi webhusaiti iwe uri kubvuma kusungwa neiyo yazvino vhezheni yeiyi mazwi ebasa.
8. Mutemo Unotonga
Aya mazwi nemamiriro anotongwa uye anoshandurwa zvichienderana nemitemo yeCloudicut uye iwe unozvipembedza uchisimbisa kutonga kwakasarudzika kwematare muNyika iyoyo kana nzvimbo.
Shandura kubva kuJPEG
JPG to ZW
JPEG kuenda kuTIFF
JPG kuenda kuTIFF
JPEG kune PSD
Shoko kuna JPG
DOC kuna JPG
4,953 kutendeuka kubvira 2020!
Yakavanzika Policy - Zviga zvebvumirano - Taura nesu - Nezvedu - API
Yakagadzirwa na nadermx - © 2021 JPEG.to
Kuve PRO kunokupa izvi zviga
☝ Batch kurodha kuitira kuti iwe unogona kudhonza uye kudonhedza akawanda mafaira panguva pane imwe neimwe